Ukuhlaziywa kweParrot Swing: Ingxenye yendiza elawulwa ngomsakazo eyihhafu | Izindaba zamagajethi
Lesi sikhathi sikulethela i- Ukuhlaziywa kweParrot Swing, i-minidrone entsha evela kuParrot womkhiqizi futhi esinikeza umqondo wokuthi kuze kube manje awukaze ubonwe kunoma iyiphi enye idivayisi, i-hybrid phakathi kwe-drone nendiza ekuvumela ukuthi ushayele i-drone ngazo zombili izindlela zezindiza nasezingeni lokuzijabulisa elithandekayo . Umqondo omusha wokuzijabulisa owethulwa njengenketho ekhangayo kulabo abafuna jabulela ijubane lokundiza lendiza ye-rc ne Ukulula kokusuka nokufika kwe-drone. Intengo yayo ingu- € 139 futhi ungayithenga ngokuchofoza lapha.
1 Indiza ye-Drone +, umqondo omnandi
2 I-Parrot Swing, i-hybrid phakathi kwendiza ye-drone ne-rc
3 Isilawuli se-Flypad, kuyintokozo
4 Ukuzimela kwe-drone nesilawuli
7 Isiphetho seParrot Swing
8 Ungayithenga kuphi iParrot Swing?
Indiza ye-Drone +, umqondo omnandi
Umqondo wokujoyina i-drone nendiza ocingweni olulodwa ubonakala ulungile; Manje, inselelo ebaluleke kakhulu ukuthola zombili izindlela zendiza kulula ukuzishayela futhi lokho ushintsho phakathi kwendiza ye-drone nendiza yendiza lwenziwa ngokukhululeka futhi ngaphandle kwengozi. Futhi lelo iphuzu eliqinile leParrot Swing; nge thinta inkinobho elula Singasuka ku-drone siye endizeni futhi ngokufanayo futhi ngaso sonke isikhathi unomuzwa wokulawula idivayisi i-100% futhi ungabi nalo uhlobo lwengozi.
Ukhumula idivayisi ngemodi ye-drone, uthole ubude obudingekayo, uthinte inkinobho kusilawuli se-Flypad futhi usuvele undiza kumodi yendiza ngokunethezeka futhi ngaphandle kwezinkinga. Lapho-ke, ngenkathi undiza kumodi yendiza, ungacindezela inkinobho ukushintshela kumodi ye-drone futhi ucingo luzozibeka endaweni emile bese luqala ukundiza sengathi luyindiza evamile. Kuzwakala kulula ... Futhi kulula lokho!.
I-Parrot Swing, i-hybrid phakathi kwendiza ye-drone ne-rc
IParrot Swing isebenza njengendiza ye-rc nanjenge-drone, kepha njengoba bekulindelekile ayiveli ikakhulukazi kuyo yomibili imiqondo. Ezingeni le-drone, indiza yayo ilula kakhulu, ngokuyisisekelo le modi yendiza yenzelwe kuphela ukwenza ukusuka nokuhlala kwedivayisi.
Ezingeni lezindiza ze-rc kufanele sikugqamise lokho akusheshi ngokweqile, ifinyelela ijubane le Amakhilomitha angama-30 ngehora, ngokufana nezindiza zokuqala ezilawulwa ngomsakazo. Ngakho-ke uma usebenzise lolu hlobo lwedivayisi ngaphambilini, ngeke uthole lutho olusha ku-Swing.
Kepha okujabulisa kakhulu ukuba nakho ithuba lokujabulela zombili izindlela zendiza kudivayisi efanayo. Ama-Drones alula ukushayela futhi lokho kusize kakhulu ukwenziwa kwabo bakhulu phakathi kwabasebenzisi, ngenkathi ukundiza indiza ye-rc kubucayi kakhulu ngoba noma iyiphi inkinga ngesikhathi sokufika ingayibhubhisa. Futhi yilokho kanye okuvunyelwa yi-Parrot Swing; Lokho noma yikuphi umsebenzisi we-novice angajabulela isipiliyoni sokuhlola indiza ye-rc ngaphandle kwezingozi futhi ngaphandle kokwenza izifundo eziyinkimbinkimbi.
Isilawuli se-Flypad, kuyintokozo
Ngaphezu kwe-Parrot Swing, sikwazile nokuhlola i-Flypad, irimothi entsha ye-Parrot, okusimangaze kahle impela. UParrot ugxekwe isikhathi eside ngokunikela kuphela ukuhlolwa kwe-minidrones yayo nge-smartphone, engakholwanga bonke abasebenzisi.
Futhi ekugcineni uParrot uthathe isinqumo sokuqeda lokho kushoda ngokwethulwa kweFlypad, umyalo ebesiwuthanda mathupha futhi ngokungangabazeki ozonikela ngokuhlanganisa kuma-drones omkhiqizo.
Ikhwalithi ye-knob feel ingeyesibili kuya kweyodwa, ngokuzizwa kwekhwalithi ephezulu kakhulu. Kulawula okunesisindo, kepha ngaso sonke isikhathi sinomuzwa wokuthi siyisisindo esixhunyaniswe nekhwalithi nokuqina kokulawula, ukuze sikubone njengokuhle.
Ukuzimela kwe-drone nesilawuli
I-Swing ifaka ibhethri le-550 mAh elinikezela cishe 7-9 imizuzu yokuzimela ngokuya ngemodi yakho yokugibela, ngenkathi i-Flypad transmitter ihlala kuze kube ngamahora we-6 ngenxa yebhethri layo le-200 mAh.
Ukushintsha ukusuka kumodi yendiza eyodwa uye kolunye kulula kakhulu futhi kuyenzeka
Isilawuli se-Flypad sisebenza kahle
Ingandiza kuphela ngaphandle komoya
Ukundiza kancane kuhle kwendiza
Isiphetho seParrot Swing
I-Parrot Swing ingukuthi idivayisi ehlekisa kakhulu nokuthi kuzokwenza ube nesikhathi esimnandi ngenkathi uyishayela. Ihloselwe ikakhulukazi umkhakha oqaliwe. Uma ungumsebenzisi oyingcweti ezindizeni ze-drones nezindiza ze-rc, kuliqiniso ukuthi kuzokushiya ufuna ubunzima obengeziwe bejubane nobunzima bezindiza, kepha lokho akusizona izithameli ezihlosiwe zalolu hlobo lwedivayisi.
Ungayithenga kuphi iParrot Swing?
UneParrot Swing ngesilawuli seFlypad esithengiswayo ngentengo engu- € 139,90 kuwebhusayithi ye-toytrónica.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukuhlaziywa kweParrot Swing, indiza yehhafu yedrone isigamu se-rc
I-HTC yethula ngokusemthethweni i-HTC U Ultra ne-HTC U Play entsha ukugwema imiphumela emibi